Momba anay - Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd.
Momba an'i Dongli
Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd. dia mpanamboatra mpitarika karazana resina fifanakalozana ion avo lenta ao Shina. Ny lisitry ny vokatra indostrialy Dongli dia manarona ny SAC, WAC, SBA, WBA, BED MIXED ary resina manokana miaraka amin'ny fivoahan'ny 20000MT (25000 M3) isan-taona sokajiana ho kilasy indostrialy, kilasy sakafo, kilasy fitsaboana, kilasy elektrika amin'ny karazany an-jatony. Dongli dia mpamokatra matihanina lehibe an'ny resin ny fifanakalozana ion ary ny resa adsorption any Shina.
Taona maro amin'ny asa aman-draharaha
Kaontinantin'ny fizarana tsena
Vola azo amin'ny varotra amin'ny taona 2020
Product Classfication Ary ny naoty
Amin'ny maha mpanamboatra manokana ny resin ny fifanakalozana ion, dia mamorona sy manamboatra vakana sombin-javatra samihafa izahay avy amin'ny 0.35-1.25mm, <0.3mm sy> 1.2mm, ary koa ny haben'ny sombina mitovy amin'ny ampiasaina amin'ny indostria toy ny tobin-jiro, rano azo sotroina, fanafody fanafody, ny bioteknolojia sy ny hydrometallurgy dia miankina amin'ny vokatray mba hampisaraka, hanaisotra, hanarenana na hanaparitahana singa sy fitambarana tena manokana. Ireo fampiharana dia tsy misy farany.
namboarina izahay mba hanome vahaolana namboarina sy hanampy amin'ny famahana ny olana atrehinao indrindra.
Miezaka izahay mba hahatratra ny tonga lafatra, ny fahafaham-pon'ny mpanjifa!
Fampidirana ny fahafaha-mamokatra
Tamin'ny taona 2020, ny vokatra isan-taona dia nahatratra 21000 taonina (eo ho eo amin'ny 27000 metatra toratelo), manarona andian-dahatsoratra resin maro ao amin'ny SAC, WAC, SBA, WBA, fandriana mifangaro, resina manokana sns.
Ao amin'ny vokatra natondrana anay, ny resin'ny SAC dia ampahany lehibe, ny faharoa dia ny SBA, arahin'ny resina fandriana mifangaro ary ny resina sepcialty.
Amin'ireto vokatra aondrana ireto, ny resin-tsakafo dia nalaza manokana tamin'ny tsena ary namboarin'ireo mpanjifa noho ny filana tsy maintsy ilaina amin'ny fiarovana amin'ny fiaraha-monina manerantany.y
Ny orinasa dia handray anjara amin'ny fiaraha-monina amin'ny vokatra azo antoka sy serivisy tonga lafatra. Tongasoa eto an-tany ny namana avy amin'ny sokajin'olona rehetra mba hitsidika an'i Bengbu Dongli Chemical Co., Ltd. ho an'ny fitarihana sy fifampiraharahana amin'ny orinasa.
Mirehareha izahay fa nanangana fiaraha-miasa ara-teknika be dia be amin'ny famokarana resina kilasy manerantany sy ireo manam-pahaizana momba ny simika mba hanomezana fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa avy amin'ny sehatra indostrialy samy hafa, nahatratra ny vokatra "fandresena marobe".
Mifantoka hatrany amin'ny fanatsarana maharitra ny kalitaon'ny vokatra sy ny traikefan'ny mpanjifa hatrany izahay mba ho mpamahana olana tsara kokoa.